4 Otú ọ dị, okwu nke si n’ike mmụọ nsọ kwuru hoo haa na n’oge ikpeazụ,+ ụfọdụ ga-adapụ+ n’okwukwe, na-aṅa ntị n’okwu nduhie ndị si n’aka mmụọ+ na ozizi ndị mmụọ ọjọọ,+ 2 n’ihi omume ihu abụọ nke ndị na-ekwu okwu ụgha,+ ndị akọ na uche ha+ dị ka ihe a dara ígwè ọkụ; 3 ndị na-amachibido ịlụ di na nwunye iwu,+ na-enye iwu ka a ghara iri ihe oriri+ Chineke kere+ ka ndị nwere okwukwe,+ ndị makwaara eziokwu ahụ n’ụzọ ziri ezi, jiri inye ekele na-eri. 4 Ihe mere e ji ekwu ihe a bụ na ihe niile Chineke kere dị mma,+ ọ dịghịkwa ihe e kwesịrị ịjụ+ ma ọ bụrụ na e ji inye ekele nata ya,+ 5 n’ihi na e doro ya nsọ site n’okwu Chineke na ekpere e kpere maka ya. 6 Site n’inye ụmụnna ndụmọdụ ndị a, ị ga-abụ ezi onye ozi nke Kraịst Jizọs, onye e ji okwu okwukwe na nke ezi ozizi ahụ+ nke i sochiworo anya+ zụọ. 7 Ma jụ akụkọ ụgha+ ndị na-emerụ ihe dị nsọ, bụ́ ndị ndị agadi nwaanyị na-akọ. N’aka nke ọzọ, na-azụ onwe gị ka i wee bụrụ onye na-asọpụrụ Chineke.+ 8 N’ihi na ọzụzụ nke ahụ́ bara ntakịrị uru; ma nsọpụrụ Chineke+ bara uru maka ihe niile,+ ebe o nwere nkwa maka ndụ dị ugbu a, na ndụ nke gaje ịbịa.+ 9 Okwu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka a nabata ya n’ụzọ zuru ezu.+ 10 N’ihi na ọ bụ ya mere anyị ji na-arụsi ọrụ ike, na-adọgbukwa onwe anyị n’ọrụ,+ n’ihi na anyị nwere olileanya+ n’ebe Chineke dị ndụ nọ, onye bụ́ Onye Nzọpụta+ nke ụdị mmadụ niile,+ karịsịa nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi.+ 11 Na-enye iwu ndị a+ ma na-akụzi ha.+ 12 Ekwela ka onye ọ bụla lelịa gị anya n’ihi na ị bụ okorobịa.+ Kama nke ahụ, bụụrụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi+ ihe nlereanya,+ n’ikwu okwu, n’omume, n’ịhụnanya, n’okwukwe, n’ịdị ọcha.+ 13 Ruo mgbe m ga-abịa, na-etinyesi mgbalị ike n’ịgụ ihe+ n’ihu ọha,+ n’inye ndụmọdụ, n’izi ihe. 14 Adịla na-eleghara onyinye ahụ+ dị n’ime gị anya, nke e nyere gị site n’ibu amụma,+ mgbe òtù ndị okenye bikwasịkwara gị aka n’isi.+ 15 Na-echebara ihe ndị a echiche;+ na-etinye obi gị dum na ha, ka ọganihu+ gị wee pụta ìhè n’ebe mmadụ niile nọ. 16 Na-elezi onwe gị+ na ozizi gị+ anya mgbe niile. Nọgide n’ihe ndị a, n’ihi na site n’ime otú a, ị ga-azọpụta onwe gị, zọpụtakwa ndị na-ege gị ntị.+